उपेन्द्र यादव नै हो अब मधेशबाट प्रधानमन्त्री : मनोज गजुरेल
चर्चित हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलले अब मधेशबाट प्रधानमन्त्री बन्ने नेता उपेन्द्र यादव नै भएको बताएका छन् । यादवले ७ वर्षपछि सत्तारोहण गरेको भोलिपल्ट कलाकार गजुरेलले यस्तो बताएका हुन् । यादव राष्ट्रवादी भावना बोकेका नेता भएको समेत गजुरेलेको तर्क छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट नियमति प्रशारण हुने कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै गजुरेलले यस्तो बताएका हुन् । गजुरेलसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आज दरबार हत्याकाण्ड भएको दिन, यसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?
यो काण्ड मात्रै होईन, धरै काण्डहरु बाहिर आएका छैनन् । मदन भण्डारी काण्ड भन्नुहोस् । स्थिर सरकार आएको छ । कसैको दबाबमा सरकार छै्न भनिदैँछ । कि त यी दुई काण्डको बारेमा सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्यो होईन भने यसैलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने सत्तामा पुग्ने काम बन्द गर्नुपर्यो ।
दरबार हत्याकाण्ड नै राजतन्त्र अन्त्यको सूरुवात भएको थियो नि ?
त्यो त थाहा भएन । तर, वास्तवमा जनताले के भन्छन भने यदि नेपालको राजाले जनताको भावना बुझेको भए विकास निर्माण गरेको भए थाईल्याण्ड, जापान लगायतका देशहरुमा अहिले भएको राजाजस्तै संस्था रहिरहनेथियो भन्ने जनताहरु चाँही छन् ।
विकास गरेको भए राजालाई अरु राजनीतिक दलहरुमा जनता आबद्ध हुने थिएनन् । दरबार हत्याकाण्ड हुनुपूर्व र पछि पनि जनताको पक्षमा काम गरेको भए त्यसो हुँदैन थियो कि भन्नु स्वभाविक छ ।
स्व.राजा वीरेन्द्रलाई प्रजातान्त्रिक राजा भन्ने गरिन्थ्यो नि ?
निश्चित रुपमा उहाँ प्रिय राजा हुनुहुन्थ्यो भनेर सुनिन्थ्यो । हामी सानै थियौं । मैले स्वयम् पनि अनुभूति गरेको कुरा वीरेन्द्र राजा ‘कुल’ शान्त नै हुन भन्ने हो । वीरेन्द्रको आवाजको आरोह–अवरोह फरक छ । ज्ञानेन्द्रको फरक छ ।
तपाई त ज्ञानेन्द्र शाहको क्यारिकेचर खुब गर्नुहुन्छ नि ?
हो । मैले गर्ने क्यारिकेचरहरुमा राम्रो मध्येको त्योपनि एक हो । एउटा घट्ना छ । पोखरामा हो । म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नक्कलमा जनताको बीच भागबाट कार्यक्रम स्थलतर्फ जाँदै थिएँ । त्यहाँका दर्शक र प्रहरीहरुले साँच्चै ज्ञानेन्द्र आएकोजस्तो गरेर सुरक्षा दिएका थिए । अनि अमेरिकामा कार्यक्रममा जाँदा दर्शकको बीचमा नमस्कार भन्दै स्टेजमा उक्लिँदैै थिएँ । एउटा दर्शकले मलाई धम्कि दिँदै यहीँ मारिदिउँ भनेर कानमा भन्यो । म अभिनय गर्नको लागि स्टेजमा जाँदै गर्दा त्यस्तो हुँदा अलि–अलि डराएँ पनि । हँसाउन स्टेजमा जाँदै गर्दा त्यसरी गालि गर्दा म कसरी हँसाउन सक्ने भन्नुस् न । पछि बुझ्दै जाँदा राजाकै पक्षका मानिस हुन भन्ने बुझियो ।
नेपालमा राजसंस्था ईतिहास भयो नि, होईन त ?
भयो । नियम, कानून, संविधानमा कतै छैन् । विश्वले गणतान्त्रिक नेपाल भनेर चिनिसक्यो । ईतिहास कहिले पछि फर्किँदैन । हाम्रो देशमा वामहरुको सरकार बनेको छ । मैले प्रचण्डलाई भनेको छु । तपाईहरु मिल्नु भएको छ । जनताले बहुमत दिएका छन् । कार्यकर्ताले पार्टी एकताको लागि साथ दिएका छन् । अब जनताले भनेको अनुसार काम गरेर देखाउनुहोस् ।
उपेन्द्र यादव सात वर्षपछि सरकारमा पुग्नुभयो, के छ सम्बन्ध ?
बहुत राम्रो छ । आज भन्दा ८ वर्ष पहिले मैले नै लुम्बिनीमा नेपालका भावी प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ । जनता हाँसेका थिए । कुनै क्षेत्रको, कुनै जातको होईन सिँगो देशको नेतृत्व लिनुपर्छ भनेको थिएँ । मुलुकको भविष्य र राष्ट्रियताको चिन्ता गर्नेमा उहाँ उभिनुभयो । मधेशबाट प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँ नै हो ।
ओली र प्रचण्डमध्ये कुन नेता तपाईलाई बढि मन पर्छ ?
मलाई दुवै नेता मन पर्छ । तपाई यसरी नै फसाउनुहुन्छ । कुरा ०५६ सालको हो । म झापामा थिएँ । म भोलिपल्ट काठमाडौं आएँ । रिपोर्टर्स क्लबमा पुग्दा कार्यक्रम सकिँदै रहेछ । म पुगें । लौ मनोज पुग्नुभयो । पत्रकारलाई रोक्नुभयो । तपाईको पारा त्यही त हो नि । विषयका बारेमा जानकारी थिएन, गिरिजाकी प्रचण्ड भन्नुभयो । क्यारिकेचर गर्न गिरिजा भन्दा प्रचण्ड ठीक भनेर प्रचण्डको सजिलो भनेको त भोलिपल्ट मिडियामा गिरिजाभन्दा प्रचण्ड ठीक भनेर आयो । यसरी फसाउने काम गर्नुहुँदैन । अहिलेको स्थितिमा ओली र प्रचण्ड दुवै नेताले देश र जनताको काम गर्नुपर्छ । विकास गर्नुपर्छ ।
तपाई चाहीँ आजकाल के गरिरहनु भएको छ ?
पछिल्लो समय चलचित्रमा अभिनय गरेको छु । भ्रष्टाचारको विपक्षमा, सदाचारको पक्षमा मेरो भूमिका रहेको छ ।
युएइ र नेपालबिच खेल सुरु, ३४ ओभरको खेलमा नेपाल फिल्डिङ गर्दै
निःशुल्क रुपमा सोलार वितरण
प्रहरी जवानको डुबेर मृत्यु
न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री छोरीकी आमा बनिन
प्राकृतिक विपत्तिको संकेत देखिएपछि उपत्यकाका ८३ खुला ठाउँ तयारी अवस्थामा : दिपक काफ्ले, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
क्रोएशिया विश्वकपमा छनोट हुने संभावना बलियो